ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၇) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၇)
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၇)
Posted by aye.kk on Nov 16, 2012 in My Dear Diary | 22 comments
၇။ မေ့စေ့အောက်နှင့် လည်ကုပ်သားတို့ ၌ ဘို့ ရှိပါက ချမ်းသာရမည့်သူ(သူဋ္ဌေးဇာတာ)။
မိန်းကလေးများ မေးစေ့အောက်နှင့်လည်ကုပ်သားတို့ ၌ ဘို့ ရှိပါက ဧကန်အမှန်
မုချချမ်းသာသည့်သူ (သူဋ္ဌေးဇာတာ) ဖြစ်သည်ဟု ဘကြီးက ပြောပြပါတယ် ။ ကျမက ဘကြီးအား ။ မေးစေ့အောက်ဘို့ ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးကိုခေါ်ဆိုတာလည်းဟု နားမလည်၍ သိချင်သဖြင့် ပြန်လည်မေးခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ကျမအသက် ဆယ်နှစ်သ္မီးအရွယ်လောက်ကပါ ။ ဘကြီးရှင်းပြတာက အချို့ မိန်းကလေးများ ၀လွန်းလျှင် အသားများ အစ်ပြီးထွက်နေတာ နှင့်မတူပါ ။ တသီးတခြားစီ ကွဲပြားခြားနားကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။ ထိုရုပ်ရည်လက္ခဏာ ပါရှိသူ မိန်းကလေး၏ ရုပ်ရည်မျိုးအား အမြင်ဖြင့်ကြည့်တတ် စေရန်ပြထားပေးဘူးပါတယ် ။
အ၀လွန်ကာ မေးစေ့နှစ်ထပ်သဖွယ် ဖြစ်နေသည့် မိန်းကလေးများအား ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ ။ မွေးရာပါ ရုပ်လက္ခဏာအရ မေးစေ့အောက်တွင် အသားဘို့ သပ်သပ်ပါ ရှိလာပြီး ။ ထိုအ၀လွန်သူ မိန်းကလေးတို့ နှင့် ရုပ်ရည် ကွဲပြားခြားနားသည်ကို ကျမအား ရှင်းပြပြောဆိုပါတယ်။ မိန်းကလေး၏ မေးစေ့အောက်၌ အသားမြင့်မောက်လျှက် ဘို့ ပါရှိနေမှုမှာ ချစ်စရာကောင်းနေသည်ကို ကျမစိတ်မှာ ခံစားမိပါတယ် ။ လည်ပင်းနောက်ဖက် လည်ကုပ်သားနေရာမှာလည်း မွေးရာပါ သဘာဝတရား အရဆိုလျှင် လည်ပင်းနောက်ဖက် လည်ကုပ်သားမှာ ပုခုံးအသားတို့ နှင့် တပြင်ညီတည်း ရှိနေရမည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ် ။ တပြင်ညီတည်း မဟုတ်ပါဘဲ မွေးရာပါ ထူးခြားလာခါ လည်ကုပ်သားမှာ သာမာန်ထက် အနည်းငယ်ပိုပြီး အသားများ မြင့်မောက်လျှက် ဘို့ သဖွယ် ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အ၀လွန်ပြီး လည်ကုပ်သားများ အစ်ထွက်နေမှုအား ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ကြောင်းအား သိရှိရပါမယ်။
ဘကြီးက ကျမအား ။ အသေအချာ နားလည်အောင် ထပ်မံရှင်းပြတာက….။
ဘကြီးက နွားတွေရဲ့ လည်ကုပ်သားနေရာတွင် အသားများနွားဘို့ ကဲ့သို့ မြင့်တက်လျှက်ရှိနေမှုအား ဘို့ ဟုခေါ်ဆိုသဖြင့်
ထိုကဲ့သို့ ပင်ရုပ်လက္ခဏာမျိုး ပါရှိလာသူ မိန်းကလေး၏ လည်ဂုတ်နောက်သားမှာ အသားများ အနည်းငယ်မျှ မြင့်မောက်တက်နေမှု ဖြစ်ပေါ်လျှက် တွေ့ မြင်ရမှုအပေါ် အခေါ်အဝေါ် ပညတ်တခု
အနေဖြင့်သာ လည်ကုပ်သားဘို့ ရှိသူ ဟုခေါ်ဆိုရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။
ထို့ အတူ မေးစေ့အောက်ဖက်၌ အသားများပြီး မြင့်မို့ မောက်လျှက် မြင်တွေ့ နေရမှု အားလည်း ။
မေးစေ့အောက် ဘို့ ရှိသူဟုသာ ခေါ်ဆိုရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ကျမအား နားလည်အောင် ပြောပြပါတယ် ။
မိဘတို့ မွေးဖွားလာ ကတည်းပင် ။ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ထိုရုပ်လက္ခာ
ဥပဓိရုပ်ရည်မျိုး ပိုင်ဆိုင်လာပါက ဧကန်အမှန်မုချ ချမ်းသာရမည့်သူ ဖြစ်ကြောင်းဘကြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
တစ်ရက်မှာ ဘကြီးက ကျမကို ။ ထိုရုပ်ရည် လက္ခဏာ ပါရှိလာသူ မိန်းကလေး တစ်ဦးအား ပြသထားပေးကာ
ထိုရုပ်လက္ခဏာ ဥပဓိရုပ်ရည်ရှိသူ မိန်းကလေးမှာ ဧကန်မုချ ချမ်းသာရမည့်သူသာလျှင် ဖြစ်ကြောင်း ။
ထိုမိန်းကလေးမှာ ချမ်းသာမည့်သူ ဖြစ်မဖြစ်အား ။
နောင်အခါ ကျမကြီးပျင်းလာသည့် အရွယ်အထိတိုင်အောင် စောင့်ကြည့်လေ့လာ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ပြောပြထားပါတယ် ။
ကျမတောင်မှ ဇရာပိုင်းအရွယ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ ။ ဘကြီးပြထားတဲ့ ထိုမိန်းကလေးမှာ ကျမထက် အသက်အရွယ် ကြီးမြင့်သူဖြစ်ပြီး
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာ ကာလကတည်းကပင် လူကုံထံ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် တင့်တင့်တယ်တယ် ချမ်းချမ်းသာသာ
နေထိုင်နိုင်နေတာတွေ့ ရှိခဲ့ရပါတယ် ။
ချမ်းသာသည့်ဘ၀သို့ ရောက်ရှိနေသည့်အပြင် လက်ရှိသူမ၏ စီးပွားရေးမှာလည်း အောင်မြင်နေလျှက် ပြိုင်စံမပေါ် နိုင်ငံကျော်ဟု ခေါ်ဆိုရလောက်အောင် ကံကုသိုလ်အကျိုးပေး ကောင်းမွန်လျှက် ရှိနေသည်ကို ကျမမျက်မြင်တွေ့ ရှိရပါတယ် ။။
ကျမကိုယ်တွေ့ ဖြစ်စဉ်လေးတခု ထပ်ပြောပြချင်မိပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့(၁၈)နှစ်ခန့် ကသိခဲ့ရတဲ့သူတစ်ဦးပါ ။
တရက်မှာ အသိတယောက်က မိတ်ဆက် ပေးလို့ သိခဲ့ရပါတယ် ။ ကျမသိစဉ်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲရောင်းစားတဲ့သူတစ်ဦးပါ ။
ထိုရုပ်လက္ခဏာ မျိုးပါရှိတာ မြင်တွေ့ ရတော့ ။ ကျမက ၀ါသနာအရ မနေနိုင်လို့ သူမကိုချမ်းသာမည့်သူလို့ 
ဟောပြောလိုက်မိပါတယ် ။သူက ရှမ်းခေါက်ဆွဲရောင်းစားတာ ချမ်းသာပါ့မလား ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ပြောတော့ အနားမှာ ကြားကြတဲ့သူတွေ
အားလုံးက၀ိုင်းရယ်ကြပါတယ် ။ အဲဒီတုံးက ထိုမိန်းကလေးက ကျမကိုပြောတဲ့အတိုင်း ချမ်းသာပါစေ ။ ရွှေပါးစပ်ငွေပါးစပ် ဆိုပြီး ကျမကိုသူမက ရွှတ်ရွှတ်နောက်နောက်နဲ့ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ကြားတဲ့သူတွေ ၀ိုင်းရယ်ကြတော့ ။
သူမက ကျမကိုအားနာမှုဖြစ်ပြီး ။ သူမသိထားတာလေးကို ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပြပြန်ပါတယ် ။ သူမ၏အဖေက သူမ၏မေးစေ့မှာ
အရှေ့သို့ အနည်းငယ်ခန့် မျှ ချွန်းထွက်ရှည်လျှက် ရှိနေသဖြင့် (ထမင်းခပ်ယူသည့် ယောင်းမဇွန်းနှင့် လွန်စွာတူလှသဖြင့်) သူမကို ငွေကော်တဲ့သူဖြစ်၍ ဈေးရောင်းစားရင် အကျိုးပေးကြောင်းနဲ့ 
ဒီထက်အပြင် သိထားတာ မရှိသည့်အကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။
သူမတို့ မိသားစုမှာ ဆင်းရဲသဖြင့် ရှမ်းခေါက်ဆွဲရောင်းစား နေရကြောင်း ။ ကျန်တဲ့သူတွေ ဈေးရောင်းလျှင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲက အားလုံးကုန်သည်အထိ မရောင်းကောင်းကြောင်း ။ အိမ်သို့ ပြန်သယ်ခါ မိသားစုများ ထမင်းလွတ်စားကြရကြောင်း ။ အိမ်ကလက်ရှိ မိသားစုများကလည်း သူမကိုသာ အားထားလာပြီး ဈေးသာရောင်းခိုင်းကြောင်း ။ သူရောင်းလျှင်တော့ ခဏလေးကုန်မြန်ပြီး ဈေးရောင်းစားတာ အလွန်ပင် အကျိုးပေးကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
သူမထံက ဗဟုသုတ တခုထပ်တိုးသိရလို့ကျမအတွက် အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမနဲ့ ကျမ အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်တာ အတော်ကြာသွားခဲ့ပါတယ် ။
(၇)နှစ်ခန့် မျှရှိခဲ့ပါတယ် ။ သူမကို ပြန်တွေ့ တဲ့အခါ မေးမိတော့ သူမလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီး သူမနေထိုင်တဲ့နေရာကနေ အခြားနေရာသို့ 
ပြောင်းရွေ့ ပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူနောက် လိုက်ပါသွားခါ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ မရောင်းတော့တာ သိရပါတယ် ။
ယောက္ခမ ဖြစ်သူက အရင်းအနှီးနည်းနည်းထုတ်ပေးသဖြင့် တရုတ်ရွှေလီဘက်သို့ သွားပြီး ။ ကုန်အနည်းငယ်မျှကူးခါ ရှာဖွေလုပ်ကိုင် စားသောက်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ။ ယခုအခါအမြတ်စွန်း လက်ထဲတွင် ဆုတ်ကိုင်ထားနိုင်ခဲ့သဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာ တာလော့ဈေးရပ်ကွက် တွင်ဆိုင်ခန်းငှား၍ တရုတ်ပစ္စည်းများရောင်းချကြည့်ရာ ရောင်းကောင်းခဲ့ကြောင်း ။ ကျမပြောတဲ့စကားအား နားထဲကြားယောင်ကာ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်ပမာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချည် သန်းနေတာမြင်နေရ၍ ကျမကိုလည်းလွန်စွာ ကျေးဇူးတင်သည့်အကြောင်းများ ပြောပြပါတယ် ။
ကျမ ပြောသည့်အတိုင်း ချမ်းသာလာပါ က သူမေ့မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောပြီး ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအချို့ ကို ကျမလက်ထဲ သူမအတင်းထည့် ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ကျမကိုလည်း မငြင်းစေချင်ကြောင်း ပေးတဲ့လက်ဆောင်အား ယူဘို့ ပြောပါတယ် ။ ယခုအခါမှာတော့ သူမဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာ
စီးပွားရေးဈေးကွက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ။ သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးမလေး အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ ။
သူမ၏ ကံအကျိုးပေးကောင်းမွန်မှုကား ကြောက်မခန်းလိလ်ိဟုပင် ဆိုချင်မိပါတယ် ။
ဘကြီးပြောပြသော ရုပ်လက္ခဏာများနှင့် သိကောင်းစရာများအား မိမိကိုယ်တွေ့ မျက်မြင်လေ့လာ တွေ့ ရှိ သိခဲ့ရမှုများအပေါ် ဗဟုသုတအဖြစ် ပြန်လည်ပြောပြ ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။။
တီကေရေ…အဲ့၂ဘို့စလုံး ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့ ဖတ်ဖူးတယ်….
ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှန်တစ်ချပ်နဲ့ မကြည့်တတ်၊ကြည့်တတ်နဲ့ကြည့်တာ ၂ဘို့လုံး
မရှိဘူးထင်တယ်…မကောင်းတဲ့အထဲ မပါသေးရင်ဘဲ တော်ပါပြီ …
တီကေပြောတဲ့ လည်ပင်းဘို့ထွက်တယ်ဆိုတာ အိန္ဒြာကျော်ဇင်လိုမျိုးလား?
ဗီဒီယိုကားတွေထဲမှာ ပိန်ကတည်းက(အခုလည်း မ၀ပါ) သတိထားမိတယ်..
လည်ပင်းအရစ်တွေလည်း ၃ရစ်လား..အဲ့တာလည်း ကောင်းတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်..
နှင်းနှင်းယောက်မလည်း ပိန်ကတည်းက ရှိတယ်..သူ့ဟာသူ နေရင်တော့
လည်ပင်းအောက်မှာ မြင်နေရတယ် ယောင်ယောင်အစ်အစ်လေးဖောင်းနေတာ..
ခေါင်းနည်းနည်း ဆတ်လိုက်ရင်တော့ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်လေ..နောက်ပြီး
မေးစေ့ပုံကလည်း အိန္ဒြာကျော်ဇင်အတိုင်း တစ်ပုံစံထဲပဲ..ဘေးတိုက်ကြည့်ရင်
၀ိုင်းလုံးပြီးကောက်နေတာ..ယောက်မက မေးစေ့ ပိုသေးပြီး လုံးလုံးလေးဆိုတော့
ပိုလှတယ် ထင်တယ်..ယောက်မက လည်ကုပ်သားလည်း မို့မောက်ဖောင်းနေတာ
(မ၀ဘဲ) သတိထားမိတယ်…ကုပ်နေရာတစ်ဝိုက်မှာ တောင်လိုမျိုးမို့မောက်ပြီးမှ
ပြေပြေလျှောဆင်းလာပြီး ပခုံးသားပြည့်ပြည့်နဲ့သွယ်သွယ်လှလှပပ ဖောင်းနေတာ…
၀လို့ ဖုဖောင်းနေတာနဲ့ မတူဘူးထင်တယ်…
ယောက်မက သူ့ထက် ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ရတာ အမှန်ပါပဲ..အရင်ကတော့
သူ့မိဘနှစ်ပါး တစ်နိုင်စီးပွားရေးလေးပဲ ကူလုပ်တယ်….အခုတော့ အိမ်ရှင်မ ….
ယောက်မက ရုပ်လည်းချောသလို အသားအရည်လည်း ၀ါဝင်းလှပတယ်…
သူ့အဆင်းကြောင့် သူ့ဘ၀ အခြေ မြင့်ရတယ် ထင်နေတာ…
အခု သူ့ဘို့တွေကြောင့်ရောပေါ့နော်… :)….
သူဌေးဇာတာလို့ကြားဖူးတာပဲ….ပြန်လာရင် ခြေဖနာင့် နီမနီပါ ကြည့်ရအုံးမယ်..
တီကေ့လိုပဲ သူ့ကို အဟောထုတ်လိုက်မယ်လေ…
‘ အူဝဲ’ လို မေးစေ့မျိုးက ‘ငွေကော်တဲ့သူ’ မေးစေ့မျိုးလားလို့ပါ….
လည်ကုပ်သားဘို့ ထွက်တာမှန်ရင် ချမ်းသာမည့်သူပါဘဲ ။
လည်တ်ိုင်ကျော့ရှင်း အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာက အပြစ်အနာဆာမရှိ
လည်ရစ်ကင်းသည့်သူကိုသာ ဆိုလိုတာဖြစ်ကြောင်း ဘကြီးပြောပြထားလို့သိထားပါကြောင်း ။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်မေးစေ့လေးက ငွေကော်သည့်သူမျိုး ဖြစ်ပါကြောင်း ။ သူမအနုပညာလုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်စွာအကျိုးပေးတာကို
သိမြင်နိုင်ပါကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ် ။မွေးရာပါမေးစေ့နှစ်ထပ်လို့ လည်းပြောလို့ ရတဲ့ မေးစေ့အောက်မှာ ဘို့ ပါရင်
လွန်စွာပင်ချမ်းသာနိုင်၏ (လည်ကုပ်နဲ့ မေးစေ့အောက်နှစ်ခုလုံးမှာဘို့ ပါရှိမှသာ သူဋ္ဌေးဇာတာဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါကြောင်း)ဆိုတာ ။ အန်တီနားလည်ထားတာလေးအား ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပြလိုက်ပါရစေ ။။
ခြေဖနောင့်အဆင်းနီင်္ကြန်လာမှုဟာ ကံအကျိုးပေးကောင်းမွန်မှုရှိတာကို များသောအားဖြင့် တွေ့ မြင်ရပါတယ်။။
တီကေ ထောက်ပြစရာရှိအောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးလိုက်တာနဲ့ ရှည်သွားရတယ်…
သေချာပြန်ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါ တီကေရေ….
အာ့ဆို အိမ်မှာ ငွေကော်သူ မေးစေ့ပိုင်ရှင် နှစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်လို့
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ နှင်းနှင်း မဟုတ်ကြောင်းပါ…
မောင်ငယ် အံစာ အကြံ အားနာဟန်နဲ့ ပြောလိုက်ရပါတယ် (နောက်တာပါကွယ်)
တီအေး ရေ အရင်က မေးနှစ်ထပ်ဆို သူဌေး မေး လို့ ကြားဖူးလို့ မပျောက်အောင်ထိမ်းထားတာရယ်။
ခုတော့ ၃ ထပ်ဖြစ်သွားပါပေါ့။ ဘယ်နှယ် လုပ်မတုန်းဟင်။
တရားမှတ်ပြီး ပျောက်သွားသည်အထိ စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ သတိကပ်ပြီး စောင့်ကြပ်ရှူမှတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
အဲဒါဆိုတကယ်ပျောက်သွားမှာ ။အန်တီလုပ်ကြည့်ပြီး သိမြင်လာခဲ့လို့ ပါကွယ်။
အကြောင်းကြောင့် အကျိုးတရားတွေ သံသရာဖြစ်နေတာ လည်နေတာတွေ သိသွားမှာပါ။
ရုပ်လက္ခဏာတွေကလည်း သူ့ အကြောင်းကြောင့် သူ့ အကျိုးပေးမှု ဖြစ်တည်လာကြတာပါလို့ 
ဒီလိုမျိုး မိန်းကလေးတွေ ..
အဲ .. မိန်းကလေးတွေ ဆိုတာထက် .. အပျိုလေးတွေ ..
ဒီရွာထဲ ရှိကြတော့ဘူးလား ..
ရှိရင် ဒီမှာ လာမန့်ဂျဘာလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ..
(အကျံနဲ့ .. အကျံနဲ့ …)
ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ရှု၊ မှတ်သားသွားပါတယ် အမအေး ခင်ဗျာ ..
သူတို့ ချစ်တဲ့သူသာသူတို့ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
မဟာနဖူးနွယ်တဲ့အစားမှာပါဝင်လို့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး စိတ်သဘောမြင့်တဲ့
သူ ။မဟာနဖူးနွယ်တာလေးက အင်မတန်ကောင်းမွန်သွားပါတယ်။
ဒါတောင် မဟာနဖူးစစ်စစ်မဟုတ်သေးဘူး ။
နွယ်ယုံလေးတင်ပါနေတာ ။နို့ မို့ ဆိုရင်တော့ အန်တီကလည်းစိတ်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့ 
ကိုယ်တိုင်မတတ်ပေမယ့် တတ်ကျွမ်းတဲ့သူကို အထင်ကြီး လေးစားတယ်။
ရွာ့ဥသျှောင်သဂျီးကို အင်္ဂါရုပ်ဖတ်ပြီး ပိုစ့်တင်ရင် ရွာထဲမှာ ကွန်မန့်အများဆုံးနဲ့ ဟာ့ထ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ရွာ့ဥသျှောင်သဂျီးကို အင်္ဂါရုပ်ဖတ်ပြီး ပိုစ့်တင်ရင် ရွာထဲမှာ ကွန်မန့်အများဆုံးနဲ့ ဟော့ထ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
စိတ်ထဲမှာလည်းဘကြီးကိုအမြဲသတိရလို့ နေပါတယ် ။။
တဂျီးမှာ ‘ဘို့’ တွေတော့ ပါလား..မလား…မသိ..
‘ ဘု ‘ တော့ ပါမယ် ထင်တယ်…ဟီဟိ..
– မန့်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ‘ ဘု ‘
– စာလုံးပေါင်းစစ်ရန် ‘ဘု’ စာလုံး ဒုတိယမြောက် စာလုံးမှာလည်း
တွေ့တာတွေပဲ ပြောတာနော်..နော် ပြောတာမဟုတ်ဘူး..
အန်တီအေး အခုပို့ စ်ထဲက လို မေးမျိုးပါတဲ့ မိန်းမမျိုးကတော့
ကျုပ်မျက်လုံးထဲ စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ကြည့်တာ ၊ ကြိုက်လို့ ရမယ့်ဟန်မတူဘူးဗျ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုပါရင် ချမ်းသာတတ်တယ်ဆိုတာတော့ သိသွားပါပြီဗျို့ 
မေသန်းနုလို ပုံစံမျိုးလေး ထင်တယ်။ သေချာ သတိမထားမိလို့ လား မသိဘူး အသိတွေထဲတော့ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
ချမ်းသာတဲ့သူဋ္ဌေးလောင်းဇာတာပါဘို့ မလွယ်ပါ ။။
D လိုအယူအဆတွေကို ကျုပ်ကတော့ လက်မခံဘူးဗျ။
လောကမှာ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတာဖြစ်တယ်။
D လိုမသေချာတဲ လက္ခဏာကို မပြောနဲ့ သူဌေးသားတောင်မှ သေချာပေါက်နော်
မိဘသေရင်အမွေရပြီ သူဌေးတန်းဖြစ်မဲ့ လူတွေတောင်မှ မွဲးနေတဲ့လူတွေရိုက်သတ်လို့မှမကုန်တာ
အခုလိုပြောတဲ့လူကဟုတ်ပါပြီ ပြောတဲ့လက္ခဏာ အတိုင်းပါတယ်ဆိုပါစို ပြီးတော့ဒီလူမွဲးနေပါက
ဘယ်လိုလေး မပြည့်စုံလို့ပါ ဘယ်လိုလေးဖြစ်မှ ချမ်းသာဇာတာလို့ခေါ်တာပါ ဆိုပြီး မလိမ့်တစ်ပတ်လုပ်
မှာပဲ။ ကျုပ်တို့ကတော့ ဇာတာတွေ ဗေဒင်တွေတွေ မလိုဘူး ကိုယ်ကြီးပွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်
ကြီးပွားမှာပဲ ကိုယ်အသုံးမကျရင် လူမွဲဖြစ်မှာပဲ () မအောင်မြင်မှာပဲ
ရုပ်လက္ခဏာပညာ အယူအဆ သဘောတရားတွေ
လက်ခံ ယုံကြည်တာ မယုံကြည်တာ အမြင်မတူတာဟာ
ဘာသာရေး အခြေခံ ကွဲပြားခြားနားမှုပေါ်မှာ မူတည်နေ ကြပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘုရားအလောင်းဟာ င်္ကြန်အင်လက္ခဏာ နဲ့ ပြည့်စုံမှုရှိလို့ဧကန်မုချ ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာ
ကြိုတင်သိမြင် ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘာသာမတူ အမြင်မတူတာ မဆွေးနွေးလိုပါ ။
ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လက်ခံတာဟာ ကိုယ်နဲ့ ဘဲသက်ဆိုင်နေပါတယ် ။ ကိုယ်သိတာကိုဗဟုသုတ အဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေတာပါ ။ ရုပ်လက္ခဏာ အဟောကျမ်းမှာပါရှိတာကိုဘကြီးပြောပြထားလို့သိသမျှ ပြန်လည်မျှဝေချပြတာပါ ။ အန်တီကလည်း ဒီပညာတွေကို အခုထိတိုင် လေ့လာနေဆဲပါဘဲ ။
ထိုင်နေလို့ ကတော့ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး ။ အကြောင်းတရားရှိမှ အကျိုးတရားဖြစ်တာ နားလည်ထားဘို့ ဘဲလိုအပ်လှပါတယ် ။။
mobile ရေ…၀င်ဖတ်တဲ့သူတွေကလည်း ရုပ်လက္ခဏာရပ်တွေကို စွဲလမ်းယုံကြည်လွန်းလို့
ဒီလိုဖတ်ပြီး ဆက်စပ်ပြီး အများကြီး မတွေးမိပါဘူး..အစွန်းရောက်မှုတွေ မပါ၊
တကူးတက တင်ပြပေးသူရဲ့ စေတနာကို တုံ့ပြန်ပြီး ၀င်ဖတ်သွားတယ်၊
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၊မှန်ကန်မှုရှိတယ်လို့ အသိပေးရေးပြီး အားပေးချီးမြှောက်ရုံပါ…
ရုပ်လက္ခဏာပညာတွေ ရှိတာ မရှိတာတွေကို လက်မခံ မယုံကြည်တဲ့သူပါ ။
အန်တီအမေက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တာပါ ။ ကံ ကံ၏အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ် ။
ရုပ်လက္ခဏာတွေရဲ့ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်နေမှုကို ငယ်ငယ်ထဲက နားဝင်လည်နေအောင် ပြောပြထားသူပါ ။ စာမဖတ်တတ်ပါဘူး။ ကျမ်းဂန်စာပေတွေမတတ်ပါဘူး။ စာပေကျမ်းဂန်တတ်တဲ့
အန်တီမိတ်ဆွေ ဘကြီး(ယ္ခင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမ္မဂဟောင်းအဖွဲ့ ဝင်)က ပြောပြထားတွေကို အန်တီအနေနဲ့ က ၀ါသနာအရ လေ့လာနေတာ ဒီအချိန်အထိတိုင်ပါဘဲ ။ ယုံတာ မယုံတာက ကိုယ့်အပိုင်းပါဘဲ ။ အန်တီကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်တွေ့ လေ့လာနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးမှသိလာတဲ့ မှန်ကန်မှုရှိတာကို ချပြတာပါ ။